Ciidamadda Itoobiya oo Wata Dabaabaad Fara badan oo maanta la Wareegey Magaaladda Baled weyne | Horn of Africa Observer
2 thoughts on “Ciidamadda Itoobiya oo Wata Dabaabaad Fara badan oo maanta la Wareegey Magaaladda Baled weyne”
Beled Weyne oo Shabab laga saaray
Ciidan Ethiopian ah
Beled Weyne ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidanka Ethiopia.
Waxay kaashanayeen ciidan ka tirsan Dowladda Soomaaliya.
Magaalada waxaa laga qabsaday al Shabaab oo ka talineysay in muddo ah.
Ciidanka Ethiopia oo markii hore Shabaab ka saaray magaalada, ayaa la sheegay in ay degeen meel ka baxsan oo ku dhow kontroolka magaalada laga soo galo.
Gudaha magaalada waxaa ku sugan ciidanka Dowladda.
Shabab waxaa hore gacantooda uga baxday caasimadda Muqdisho.
Magaalooyinka waaweyn oo Koofurta iyo bartamaha Soomaaliya, waa magaaladii labaad ee ka baxda gacanta Shabaab.
Lama yaqaan ciidanka Ethiopia in ay u gudbi doonaan Buulo Burte iyo Baydhaba midkood ama labada.
Ciidanka Kenya oo isaguna bishii Oktoobar ku duulay fariisimaha Shabaab ee ku dhow soohdinta Kenya ayaan iyagu ilaa iyo hadda aan gacanta ku dhigin magaalo weyn.
Lama oga in ay Istaraatiijiyadooda dagaal ka mid tahay in ay qabsadaan Kismaayo iyo ama magaalooyinka kale ee waaweyn ee ku dhow.
Afhayeenka dowladda Ethiopia Bereket Simon oo BBC wareysi siiyay ayaa sheegay in ciidankooda ay taageerayaan kuwa dowladda Soomaaliya oo uu sheegay inay ku casuuntay inay soo farageliyaan.
Afhayeenka Dowladda Itoobiya oo sheegay in ciidamadeeda galay gudaha Soomaaliya ay caawinayaan Dowladda KMG ah ee Soomaaliya.
Afhayeenka Dowladda Itoobiya Bereket Simon ayaa BBC-da u sheegay in Ciidamadooda ay taageerayaan Dowladda KMG ah ee Soomaaliya.
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in Ciidamada ay gudaha u galeen Soomaaliya, si ay u taageeraan Ciidamada Dowladda KMG, kadib markii saaka ay dagaal ku qabsadeen Magaalada Istiraatiijiga ah ee Beledweyn.
“TFG waxay u yeeratay Dowladaha deriska ah, oo ay Itoobiya ku jirto, si ay uga caawiso howl galka milateri ee ka dhanka ah Al-Shabaab, sidaas darteed waa sababta aan u galnay” ayuu yiri Bereket Simon oo la hadlay Barnaamijka saacadlaha ee BBC-da ka baxa.
Saraakiil u hadashay Dowladda KMG ayaa goor hore xaqiijiyay in Ciidamada Itoobiya ay garabsanayaan, si Al-Shabaab meesha uga saaraan.
Xaalada magaalada Beledweyn ayaa iminka degan, Ciidamada Itoobiya ayaa saldhigtay Xarunta Maamulka iyo Buurta Janta Kundishe oo magaalada Beledweyn u jira 5-KM.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in Ciidamada Itoobiya ay gaarayaan kumanaan askari, kuwaasoo wata taangiyo iyo hub cul culus, waxaana ay u ruuqaansadeen wadada laamiga ee tagta Magaalada Buulo Burde.
War saxaafadeed saaka ka soo baxday Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu bilwoday howl galka nabad soo celinta iyo xasilinta Soomaaliya, si Al-Shabaab looga xoreeyo Gobolada ay gacanta ku hayaan.
Afhayeenka Al-Shabaab C/casiis Abuu Muscab ayaa sheegay in xeelad dagaal uga soo baxeen Magaalada, walina ay dagaalka sii wadayaan.
Dagaaladii cuslaa ee ka dhacay saaka duleedyada Beledweyn ayaa waxaa ku dhintay ilaa labaatameeyo ruux oo ay ku jiraan dhinacyadii dagaalamayay.
Magaalada Beledweyn aaa ah magaalo istiraatiiji ah oo ku taala Bartamaha Soomaaliya, gacan ku heynta ayaa macno badan u leh dhinac kasta oo maamulaya, waxaa ka baxda wado dheer oo tagta Caasimada Soomaaliya, waxay isku xirtaa Gobolada Koofurta, Bartamaha iyo Waqooyiga Soomaaliya.